ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ကောင်းမွန်မှု ၊ ထိရောက်မှု သေချာခိုင်မာစေရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းချက်များ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံရှင်းကျန်း(ဝေဂါ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ဗလီတစ်လုံးရှေ့တွင် ဝတ်ပြုသူများ စုရုံးရောက်ရှိနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဘာသာရေး လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့်ကို လေးစားခြင်း နှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်း အစီအမံများသည် ကောင်းမွန် ထိရောက်မှုရှိသည်ကို သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ၊ လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေး နှင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းပြည်၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်အား အကာအကွယ်ပေးခြင်း နှင့် ဘာသာတရားများကို ခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံများအားလုံး ကြုံတွေ့နေရသည့် ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ရာ ယင်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် တရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဆက်လက်၍ ကတိကဝတ်ပြုထားဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် ကတိကဝတ်မှာလည်း မယိမ်းမယိုင် ဆက်လက်တည်ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြုဖွယ်ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးခင်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားညီလာခံတွင် တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သူ တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ပြည်သူများ၏ ဘာသာရေးသက်ဝင်ယုံကြည်မှုအပေါ် လေးစားသမှုရှိရန် အရေးကြီးကြောင်း ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုမူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့ အပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေအထားတွင် ဘာသာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဆုတ်ကိုင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဘာသာရေးသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူ သန်း ၂၀၀ နီးပါး ၊ (ဘုန်းကြီး၊ဗလီဆရာ၊သင်းအုပ်ဆရာ) စသည့် ဘာသာရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူ ၃၈၀,၀၀၀ ကျော် ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ပေါင်း ၅,၅၀၀ ခန့် နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ အခမ်းအနားကျင်းပရန် မှတ်ပုံတင်ထားမှုပေါင်း ၁၄၀,၀၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအခြေအနေအောက်တွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးပါသော သဘောသဘာဝသာဖြစ်သည်။ မကြာသေးခင်က ကျင်းပခဲ့သော ညီလာခံတွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ထိရောက်မှုရှိစေရန် မူဝါဒများ နှင့် ကျင့်ထုံးများကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဆိုသည့် သတင်းစကားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါးထားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ပြည်သူများ၏ ဘာသာရေးလွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို ကောင်းစွာ ထင်ဟပ်စေခဲ့သလို နိုင်ငံ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို အပြည့်အဝ ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းလွတ်လပ်ခွင့်အား ရှုထောင့်အသီးသီးဖြင့် ထိန်းညှိရန် အထူးဥပဒေများ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံက ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် မတူညီသော ဥပဒေပြဌာန်ချက်များအောက်တွင် လွပ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးထားမှုမှာ ရှုထောင့်အမြင် ကွဲပြားခြားနားကြောင်း သိရသည်။
ဥပမာ- လူနည်းစုကာကွယ်ရေးပြဌာန်းချက် ဥပဒေသည် လူနည်းစုများအား ဘဝရှင်သန်မှု ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊ အကာအကွယ်ပေးမှု ၊ ဥပဒေကြောင်းအရ ပညာရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်ရမှု ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအပေါ် ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းမပြုမှု စသည့် တူညီသောအခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားစေသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု တစ်ခုသည် စတင်အသက်ဝင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဘာသာရေး နှင့် လူမှုရေးသဟဇာတဖြစ်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး စည်းမျဉ်းပြဌာန်းချက်သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူရော မကိုးကွယ်မယုံကြည်သူရော ၊ ထို့ပြင် မတူညီသော ဘာသာရေးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာပါ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည့်နေရာ နှင့် ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များ အကာအကွယ်ပေးခြင်းအပါအဝင် ၎င်းတို့အတွက် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အားထုတ်မှုတွင် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုသည် ဘာသာတရားလိုက်စားသူများအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်အတူ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ- ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ပြည်နယ်ရေးရာကိစ္စရပ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က တရုတ်ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် ကော်မတီများ၏ အဆင့်အသီးသီးတွင် အဖွဲ့ဝင်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြင့် ဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀,၀၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် မူဝါဒများ နှင့် ကျင့်ထုံးများ “ China’s Policies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief ” ဟူသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက္ကူဖြူအရ သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ယင်းအားထုတ်မှုများသည် မတူခြားနားသောဘာသာရေးသက်ဝင်ယုံကြည်သူများအကြား တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် လေ့လာသင်ယူရန် နှင့် လေးစားမှုရှိရန် နှင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု နှင့် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်လည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတော် နှင့် ဒေသတွင်း ဘာသာရေးကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အုပ်စုများသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အကြား အပြန်အလှန်နားလည်မှု နှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို တွန်းအားပေးခြင်း နှင့် တရုတ်လူမျိုးတိုး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အတူ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ညိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သော အရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးရန် ပူးတွဲညီလာခံများ ကျင်းပရေးယန္တရားတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားသည်။
ဘာသာရေးအုပ်စုများသည် ဘာသာရေးအဝန်းအဝိုင်းအတွင်းရှိ ပြည်သူများ နှင့် မရေမတွက်နိုင်သော သက်ဝင်ယုံကြည်သူများနှင့်အတူ အစိုးရ နှင့် ပါတီအကြား ဆက်သွယ် ပေါင်းကူးပေးသည့် တံတားတစ်စင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ထိရောက်သော မူဝါဒများ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အပြည့်အဝ သစ္စာရှိရှိဖြင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Xinhua Commentary: China’s measures ensuring religious freedom sound, effective
BEIJING, Dec.6(Xinhua) — China’s measures respecting and protecting freedom of religious belief have proven sound and effective, contributing to the ethnic unity, social harmony and comprehensive development of the world’s most populous country.
Protecting freedom of religious belief and adapting religions to the modern era are common tasks facing all countries around the world, and the Chinese leadership has remained committed to this pursuit. China’s commitment to freedom of religious belief is unswerving.
Atarecent national conference on work related to religious affairs, Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, stressed the importance of respecting people’s religious beliefs, managing religious affairs in accordance with the law, as well as upholding the principle of developing religions in the Chinese context.
China has nearly 200 million religious believers, over 380,000 clerical personnel, some 5,500 religious organizations and more than 140,000 lawfully registered venues for religious activities.
Under such circumstances, it is only natural for China to attach great importance to religious affairs. The recent conference has sentaclear message that China will stick to the policies and practices that have proven effective and suitable for the country.
The protection of the people’s freedom of religious belief is well reflected in China’s legal system and the country’s religious affairs have been managed in line with the law.
In addition to being explicitly mentioned in the country’s Constitution that the citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of religious belief, China has also made specific laws and regulations regarding different aspects of this freedom, and different aspects of freedom of religious belief are protected underanumber of different laws.
For example, the Law on the Protection of Minors stipulates that minors enjoy equal rights to life, development, protection, participation and education in accordance with the law, irrespective of their religious beliefs.
In 2018,aset of revised regulations on religious affairs came into effect. Highlighting religious and social harmony, the regulations stipulate that believers and nonbelievers, as well as believers of different religions, should respect each other.
The regulations also include provisions that protect the rights of believers, places of worship and religious organizations, and require local governments to provide public services to them.
China’s efforts in ensuring freedom of religious belief have inspired religious personnel to contribute to the development of socialism with Chinese characteristics.
For example, religious personnel have been active participants in the deliberation and administration of state affairs. As of 2018, approximately 20,000 prominent figures from religious circles served as deputies and members at all levels of people’s congresses and committees of the Chinese People’s Political Consultative Conference, according to the 2018 white paper titled “China’s Policies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief.”
In addition, the efforts have inspired different religions to respect and learn from each other, and take part in exchanges and dialogues. In China, national and local religious groups have establishedamechanism of joint conferences to discuss issues concerning religious affairs, creating modes of religious dialogue with Chinese characteristics and enhancing mutual understanding and friendship.
Religious groups stand asabridge and bond connecting the Party and the government with people from religious circles and the countless religious believers. The country’s effective policies and measures to safeguard freedom of religious belief will continue to be fully and faithfully implemented. Enditem